SKK Family Construction – Construction for Everyone
SKK Family Construction
Construction for Everyone
Our construction build with quality and skill to give you happiness
အက်စ်ကေကေမိသားစုဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ(SKK Family Construction Co., Ltd.) စတင်မတည်ထောင်မီ (၂) နှစ်ကျော်ခန့်က SKK ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် မဖွဲ့မီ နေပြည်တော်မြို့ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် လမ်း၊ ရေမြောင်း၊ ပလက်ဖောင်း Culvert (ရေနုတ်မြောင်း)များ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၀)ရက်နေ့တွင် စိုးကိုကိုမိသားစုဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ (Soe Ko Ko Family Construction Co., Ltd.) အဖြစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၀န်ကြီးဌာနတွင် တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ မူလလိပ်စာမှာ အမှတ် (၄၄၁၂)၊ (၂၃)လမ်း၊ အောင်စည်သာရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနားမြို့၊ နေပြည်တော်ဖြစ်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီအား မန်နေဂျင်းအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာအဖြစ် ဒေါက်တာသင်းသင်းမွန်၊ ဒါရိုက်တာအဖြစ် ဒေါက်တာကောင်းထက်တို့ဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ဦးစိုးကိုကိုမှလည်း ဒါရိုက်တာအဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီလိပ်စာအားလည်း အမှတ် (၁၈၄)၊ ကျွန်းရွှေမြိုင်လမ်း၊ (၂၃) ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ္ဏ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကန်ုတိုင်းဒေသကြီးသို့ ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ်မှာ ၃၂၅၉/၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါ စိုးကိုကိုမိသားစုဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ (Soe Ko Ko Family Construction Co., Ltd.)၏ Group of Company အဖြစ် အက်စ်ကေကေမိသားစုဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ( SKK Family Construction Co., Ltd.)အား မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးကောင်းထက်မှ ဆောင်ရွက်ပြီး ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ် ၂၀၀၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အား ၂၀၁၆ သြဂုတ်လ (၄)ရက်နေ့တွင် မှတ်ပုံတင်၍ လက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
We offer high quality standard decoration with affordable pricing.
We also provide estimate construction cost for your dream buildings. We calculate the cost as according to your plan budget .
Our skillful and experienced building layout structure designer will help you to meet expected requirement.
Pathein Nyunt 2nd Street
Address: No. 9, Pathein Nyunt 2nd st., Mingalar Taung Nyunt Tsp.
AYA Bank (Meikhtila)
Ayeyarwady Bank decoration project.
Max Energy Gas Station
AYA Bank (Tatkone Branch)
Address: No (4), Pyi Taw Aye Street, Thingangyun Township, Yangon.
Tayet Chaung Bridge (NayPyiTaw)
For more information for pricing and installment plan, please feel free to contact us, our experienced staff will be pleased to provide for you.
No 184, Kyun Shwe Myaing Street, Thingangyun Township, Yangon
Copyright © 2020 SKK Family Construction